दर्शक संख्या बढाउनको लागि YouTube मा भरपर्दो पोस्टिङ समयतालिका सिर्जना गर्ने तपाईंको गाइड - YTpals
दर्शक वृद्धि गर्न YouTube मा भरपर्दो पोस्टिङ समयतालिका सिर्जना गर्ने तपाईंको गाइड
त्यहाँ अनगिन्ती लेख र ब्लगहरू छन् जसले YouTube सामग्री सिर्जनाकर्ताहरूलाई पोस्टिङ तालिकामा टाँसिएर नियमित रूपमा भिडियोहरू पोस्ट गर्न सल्लाह दिन्छ। यद्यपि, त्यहाँ सामग्री सिर्जनाकर्ताले सफलताको लागि पोस्टिङ तालिका कसरी सिर्जना गर्न सक्छ भन्ने बारे धेरै जानकारी छैन। यदि तपाईं YouTube दृश्यमा अपेक्षाकृत नयाँ हुनुहुन्छ भने, पढ्नुहोस्। यस पोष्टमा, हामी तपाईंसँग ठोस परिणामहरू प्रदान गर्ने YouTube सामग्री समयतालिकाको लागि अभ्यासमा राख्न सक्ने सबै शीर्ष सुझावहरू साझेदारी गर्नेछौं।
YouTube पोस्टिङ आवृत्ति सुविधा प्रयोग गर्नुहोस्
यदि तपाइँ विस्तृत पोस्टिङ तालिका सिर्जना गर्न चाहनुहुन्न भने, तपाइँ YouTube पोस्टिङ फ्रिक्वेन्सी सुविधा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ जुन प्लेटफर्मले सामग्री सिर्जनाकर्ताहरूलाई प्रदान गर्दछ। तपाईंले प्रकाशित गर्नको लागि एक विशेष भिडियो अपलोड गर्दा यो सुविधा प्रयोग गरेर सेटिङहरू ट्वीक गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंको भिडियो अपलोड हुँदा, तपाईंले प्रकाशनको लागि भिडियो सेटअप पूरा गर्न विभिन्न विवरणहरू प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ। यो तब हुन्छ जब तपाइँ 'दृश्यता' ट्याबमा आउनुहुनेछ, जसले तपाइँलाई तपाइँको भिडियो प्रकाशित गर्न समय तालिका बनाउन अनुमति दिनेछ।
तपाईलाई मिल्ने पोस्टिङ तालिका बनाउनुहोस्
YouTube मा धेरै सामग्री सिर्जनाकर्ताहरूले आफ्नो हेराइ र सदस्य संख्या बढाउनको लागि हरेक दिन सामग्री प्रकाशित गर्दै छन्। जे होस्, अरू सबैले दैनिक सामग्री रिलिज गरिरहनुको मतलब तपाईंले पनि गर्नुपर्छ भन्ने होइन। पक्का, यदि तपाइँ नियमित अपलोडहरू गरेर उच्च गुणस्तर कायम राख्न सक्षम हुनुहुन्छ भने, अगाडि जानुहोस्। यद्यपि, यदि तपाइँ प्रत्येक हप्ता 1 वा2भिडियोहरू प्रकाशित गर्न बढी सहज हुनुहुन्छ भने, तपाइँ यही कुरामा अडिग रहनुपर्छ। याद गर्नुहोस्, मात्राको लागि गुणस्तरको त्याग कहिल्यै नगर्नुहोस् - यसले तपाईंलाई छोटो अवधिमा नतिजा दिन सक्छ, तर तपाईं लामो समयसम्म दर्शकहरूबाट गुमाउनुहुनेछ।
YouTube स्टुडियोको अधिकतम फाइदा लिनुहोस्
YouTube स्टुडियो एउटा सुविधा हो जसले सामग्री सिर्जनाकर्ताहरूलाई उनीहरूको सामग्री सहज र निर्बाध रूपमा व्यवस्थापन गर्न अनुमति दिन्छ। सामग्री व्यवस्थापन सुविधाहरूको एक टन उपलब्ध गराउनुको अलावा, YouTube स्टुडियोले सामग्री सिर्जनाकर्ताहरूलाई तिनीहरूको भिडियोहरूको प्रदर्शनमा अन्तर्दृष्टि पनि दिन्छ। यी अन्तर्दृष्टिहरूले धेरै आवश्यक विवरणहरू प्रदान गर्दछ, जसमा तपाईंका भिडियोहरू सबैभन्दा धेरै हेरिएको समयहरू समावेश छन्। यो जानकारी ट्र्याक गर्नु अत्यावश्यक छ, किनकि यसले तपाईंलाई २०२२ मा YouTube मा पोस्ट गर्ने उत्तम समयहरू बारे केही उत्कृष्ट विचारहरू दिनेछ।
सबै भन्दा माथि स्थिरता को लागी लक्ष्य
यदि तपाईं YouTuber को प्रकार हुनुहुन्छ जसले प्रति हप्ता एक भिडियो मात्र प्रकाशित गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईंले प्रस्ताव गर्नु पर्ने प्रकाशित भिडियोहरूको संख्याको बारेमा चिन्ता नगर्नुहोस्। यसको सट्टा, हामी स्थिरतामा ध्यान केन्द्रित गर्न सिफारिस गर्छौं, जसले तपाईंको दर्शकहरूलाई तपाईंबाट यथार्थपरक अपेक्षाहरू राख्न अनुमति दिनेछ। उदाहरणका लागि, यदि तपाइँ प्रत्येक सोमबार एक भिडियो पोस्ट गर्नुहुन्छ भने, तपाइँले यो सुनिश्चित गर्नुपर्दछ कि जे हुन सक्छ, तपाइँले भिडियो अपलोड नगरी बित्ने सोमबार हुनेछैन। यसले तपाईंलाई आफ्नो लागि यथार्थपरक लक्ष्यहरू सेट गर्न मद्दत गर्नेछ - लक्ष्यहरू जुन तपाईंले हासिल गर्न र मापन गर्न सक्नुहुन्छ।
YouTube Shorts र YouTube Live को लागि पनि केही सोच्नुहोस्
एक पटक, YouTube ले सामग्री सिर्जनाकर्ताहरूलाई मात्र एक प्रकारको भिडियो पोस्ट गर्न अनुमति दियो, तर ती दिनहरू लामो समय बितिसकेका छन्। आजकल, YouTube ले Shorts र Live सहित विभिन्न प्रकारका सामग्रीहरू प्रदान गर्दछ। YouTube Shorts एकदमै सफल TikTok र Instagram Reels को प्रतिस्पर्धीको रूपमा उभिएको छ, र यसले सामग्री सिर्जनाकर्ताहरूलाई उनीहरूको सामग्री प्रस्तावमा विविधता ल्याउन अनुमति दिन्छ। YouTube लाइभ सामग्री सिर्जनाकर्ताहरूका लागि आफ्ना फ्यानहरूसँग नजिक पुग्ने उत्कृष्ट माध्यम पनि हो। त्यसैले, पोस्टिङ समयतालिका सिर्जना गर्दा, YouTube Shorts र YouTube Live को लागि छुट्टै समयतालिकाहरू सिर्जना गर्नुहोस्।
यदि तपाईँ चाहानु हुन्छ भने निःशुल्क YouTube हेराईहरू तपाईंको च्यानललाई उडान सुरु गर्नको लागि, YTpals जस्ता सेवाहरू प्रयोग गर्ने बारे किन विचार नगर्नुहोस्। नि:शुल्क हेराइ र लाइकहरू बाहेक, YTpals ले सामग्री सिर्जनाकर्ताहरूलाई पनि अनुमति दिन्छ YouTube ग्राहकहरू खरीद गर्नुहोस्.
दर्शक वृद्धि गर्न YouTube मा भरपर्दो पोस्टिङ समयतालिका सिर्जना गर्ने तपाईंको गाइड YTpals लेखकहरू द्वारा, 24 जनवरी 2022
YTpals मा पनि
YouTube ग्राहकहरू खरीद गर्दै - Re कारणहरू तपाईंले किन यसो गरिराख्नुपर्दछ
सोशल मिडियामा प्राय जसो व्यक्ति प्रभावकारितामा डराउँछन् जसले मानिसहरूलाई उनीहरूको अनुसरण गर्न भुक्तान गर्छन्। जब यो तपाइँको YouTube च्यानलमा आउँदछ, तथापि, त्यहाँ यस अभ्यासका केही फाइदाहरू छन्। जब तपाईं सामग्री निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ ...
2021 मा लिने YouTube मार्केटिंग चरणहरू
वर्ष २०२० विश्वका लागि विशेष गरी व्यवसायहरूको लागि एकदम अभूतपूर्व र चुनौतीपूर्ण भएको छ। COVID-१ p महामारीले विश्वभरि कहर बरपायो, व्यवसायहरूलाई उनीहरूको शटरहरू ठूलो संख्यामा तल तान्न जोड दिँदै…।
थप युट्यूब सदस्यहरू छिटो प्राप्त गर्न Gu ग्यारेन्टी विधिहरू - गाइड
युट्यूबको प्रभाव र प्रयोगकर्ताहरूको संख्या द्रुत गतिमा बढ्दै जाने क्रममा, यो स्पष्ट भएको छ कि शीर्ष प्रदर्शन गर्ने अनलाइन भिडियो प्लेटफर्मले कैपिटल गर्नका लागि विभिन्न अवसरहरू राख्दछ। YouTube ले कुनै पनि अनुमति दिन्छ ...
अब तपाइँको नि: शुल्क प्रशिक्षण पहुँच गर्नुहोस्
नि: शुल्क प्रशिक्षण कोर्स:
YouTube मार्केटिंग र SEO 1 मिलियन दृश्यहरू प्राप्त गर्न
YouTube विशेषज्ञबाट hours घण्टाको भिडियो प्रशिक्षणको निःशुल्क पहुँच पाउन यो ब्लग पोस्ट साझा गर्नुहोस्।
के तपाईंलाई तपाइँको YouTube च्यानलको गहन मूल्या evalu्कन पूरा गर्न YouTube कार्यको आवश्यकता छ र तपाईंलाई कार्य योजना प्रदान गर्नुहुन्छ?
हामी एक विशेषज्ञ प्रदान गर्दछौं यूट्यूब च्यानल मूल्यांकन सेवा
के तपाइँ YouTube विशेषज्ञको मद्दत चाहानुहुन्छ?
हाम्रो युट्युब विज्ञहरूले उनीहरूलाई तपाईंको च्यानलको समीक्षा समीक्षा गर्न आफैं रेकर्ड गर्न दिनुहोस् किनकि उनीहरूले तपाईंलाई महत्वपूर्ण निर्देशनहरू प्रदान गर्दछन् व्यावसायिक रूपमा यसलाई प्रत्येक पक्षमा सुधार गर्न।
हो, म एक विशेषज्ञको सहयोग चाहान्छु!